मतगणना गर्दा कुन मतपत्र पहिले गनिन्छ ? | Ekhabar Nepal
राजनीति मंसिर २१ २०७४ ekhabarnepal
काठमाडौं, २१ मंसिर - दोस्रो चरणको निर्वाचन भइसक्दा पनि पहिलो चरणको निर्वाचनकै मतपेटिकाहरु अझै खोलिएको छैन ।निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएपछि पहिलो चरणका मत पेटिकाहरु खोल्ने तयारी गरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिने वित्तिकै पहिलो चरणको निर्वाचनका मत पेटिकाहरु खुल्ने छन् । साँझ ५ बज्ने वित्तिकै पहिलो चरणको मतगणना शुरु हुनेछ ।
आज भएको निर्वाचनका मतपेटिकाहरु चाहिँ साँझ ढिलो गरि खुल्ने छन् । विर्नाचन सकिएपछिको प्रक्रिया र मत पेटिका संकलनको काम पनि गर्नुपर्ने भएकोले दोस्रो चरणको मत गण्नामा केही घण्टा ढिला हुने छ । तर पहिलाे चरणको निर्वाचनको मतगणना चाहिँ साँझ ५ बज्ने वित्तिकै शुरु हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
देशभर मतगणना त शुरु हुनेछ, तर कसरी ?
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता ढकालले आजको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मतगणना शुरु हुने बताए । उनले २१ गते पाँच बजेपछि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जिल्लाहरुमा मतगणना शुरु गर्न सकिने बताए । सोही बमोजिम मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरुलाई परिपत्र भइसकेको उनले बताए । पहिलो चरणमा भएको चुनावको मतगणना २१ गते साँझ पाँच बजेपछि गर्न सकिने छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनको मतगणना पनि आजैदेखि शुरु हुने छ ।केही प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने भएकोले दोस्रो चरणको मतगणना केही घण्टा ढिलो गरी शुरु हुनेछ ।
आयोगले प्रत्यक्ष तर्फको अन्तिम मत परिणाम ४ दिन भित्रमा र समानुपातिक तर्फको ८ दिन भित्रमा आइसक्ने जनाएको छ ।आयोगले सम्भव भएसम्म प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतगणना एकै पटक गर्ने जनाएको छ ।तर ठाउँ र कर्मचारीको अपुग हुँदै गर्दा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष तर्फको मतगणना एकै पटक गरिने आयोगले जनाएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिको मतगणना पनि एकै पटक शुरु गर्न नसकिएमा पहिले प्रतिनिधिसभा तर्फ प्रत्यक्षको मतगणना गरिने आयोगले जनाएको छ ।
त्यसपछि प्रदेशको प्रत्यक्षको मतगणना हुने छ । त्यसपछि बल्ल समानुपातिकको मतगणना शुरु हुने छ ।ढकालले मतगणना गर्नको लागि ठाउँ र कर्मचारीको अभाव नभएमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतगणना एकै पटक शुरु गरिने बताए ।यदि ठाउँ र कर्मचारीको अभाव भएमा चाहिँ पहिले प्रत्यक्ष र त्यसपछि समानुपातिकको मतगणना गरिने जनाएको छ । मतगणनामा सबैभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फको बाक्सा खुल्ने छ । त्यसपछि प्रदेशसभा तर्फको प्रत्यक्षको बाक्सा खुल्ने छ । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा समानुपातिक र प्रदेशसभा समानुपातिक तर्फको बाक्सा खुल्ने छ ।
पहिलो चरणको मतगणना साँझ पाँचबजेपछि सर्वदलिय बैठक बस्ने वित्तिकै शुरु हुने छ ।दोस्रो चरणको चाहिँ मतगणना सकिएपछि मत पेटिका बन्द गरेको मुचुल्का तयार हुने छ । त्यसपछि प्रहरीले मतपेटिकाहरु सम्बन्धि ठाउँमा पुर्याउने छ । मतपेटिका ठाउँमा पुगेसँगै सर्वदलिय बैठक बसेर मतगणना शुरु हुने छ ।